Otu esi ebute ụzọ na AI na -ebelata usoro data enweghị isi | Martech Zone
Ngwọta na-akwado AI chọrọ nhazi data ka ọ dị irè. Na imepụta usoro data ndị ahụ nwere nnukwu nsogbu na -enweghị isi na ọkwa usoro. Mmadụ niile na -ata ahụhụ site na ajọ mbunobi (ma ndị maara ihe na ndị amaghị ihe ọ bụla). Esemokwu nwere ike ị nweta ụdị ọ bụla: mpaghara, asụsụ, mmekọrịta ọha na ụba, nwoke na nwanyị, na ịkpa ókè agbụrụ. A na -etinyekwa ajọ mbunobi ndị ahụ n'ime data, nke nwere ike ibute ngwaahịa AI nke na -aga n'ihu ma na -ebuli oke. Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ụzọ nlebara anya iji belata mwepu na -abanye na nchịkọta data.
Ihe Nlereanya nke Na -egosi Nsogbu Nsogbu
Otu ihe atụ ama ama nke data enweghị mmasị nke butere ọtụtụ mgbasa ozi na -adịghị mma n'oge ahụ bụ ịmaliteghachi ịgụ akwụkwọ nke masịrị ụmụ nwoke karịa ụmụ nwanyị. Nke a bụ n'ihi na etinyerela data nke ngwa mbanye site na iji malite n'ime afọ iri gara aga mgbe ọtụtụ ndị na -achọ akwụkwọ bụ nwoke. Ihe data ahụ adịghị mma na nsonaazụ ya gosipụtara nke ahụ.
Ihe atụ ọzọ a na-akọkarị: Na ogbako onye nrụpụta Google I/O nke a na-eme kwa afọ, Google kesara nhụchalụ nke ihe enyemaka enyemaka dermatology nke AI na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe na-eme n'okwu metụtara akpụkpọ ahụ, ntutu na mbọ. Onye na -enyere aka na -ahụ maka akpụkpọ ahụ na -emesi ike ka AI na -agbanwe iji nyere aka na ahụike - mana ọ kọwakwara ohere nwere ike ịkpa oke ịbanye na AI n'ihi nkatọ na ngwa adịghị ezuru ndị agba.
Mgbe Google kwupụtara ngwa ahụ, ụlọ ọrụ ahụ kwuru:
Iji jide n'aka na anyị na -ewu maka onye ọ bụla, ihe nlereanya anyị na -egosi ihe dị ka afọ, okike, agbụrụ, na ụdị akpụkpọ anụ - site na akpụkpọ ahụ na -achaghị acha na -achaghị acha ruo akpụkpọ anụ na -anaghị adịkarị ọkụ.
Google, na -eji AI iji nyere aka chọta azịza nke ọnọdụ anụ ahụ nkịtị
Mana otu akụkọ dị na Vice kwuru na Google emeghị iji nchịkọta data gụnyere:
Iji mezuo ọrụ ahụ, ndị nyocha ahụ jiri dataset ọzụzụ nke ihe osise 64,837 nke ndị ọrịa 12,399 dị na steeti abụọ. Mana n'ime puku kwuru puku ọnọdụ akpụkpọ ahụ nọchiri anya ya, naanị pasent 3.5 sitere na ndị ọrịa nwere ụdị akpụkpọ ahụ Fitzpatrick V na VI - ndị na -anọchite anya akpụkpọ anụ aja aja na aja aja gbara ọchịchịrị ma ọ bụ akpụkpọ ojii n'otu n'otu. Pasent 90 nke nchekwa data bụ ndị nwere akpụkpọ anụ dị ọcha, akpụkpọ ahụ na -acha ọcha, ma ọ bụ akpụkpọ ahụ na -acha nchara nchara, dịka ọmụmụ ahụ siri dị. N'ihi nlele ele mmadụ anya n'ihu, ndị na-ahụ maka akpụkpọ anụ na-ekwu na ngwa ahụ nwere ike kwụsịchaa ma ọ bụ na-enyocha ndị na-adịghị ọcha.
Onye osote, Ngwa Google Dermatology ọhụrụ emeghị maka ndị nwere akpụkpọ ojii
Google zara ya site n'ikwu na ọ ga -anụcha ngwa ahụ tupu ọ hapụ ya nke ọma:
Ngwá ọrụ enyemaka dermatology anyị na-akwado AI bụ njedebe nke nyocha ihe karịrị afọ atọ. Ebe ọ bụ na egosiri ọrụ anyị na Ọgwụ Nature, anyị gara n'ihu na -azụlite na nụchaa teknụzụ anyị site na itinye mgbakwunye data nke gụnyere data nke puku kwuru puku mmadụ nyere, yana ọtụtụ nde ihe ndị ọzọ na -eche banyere akpụkpọ ahụ.
Dịka anyị nwere ike ịtụ anya na mmemme mmụta AI na igwe nwere ike idozi maka ajọ mbunobi ndị a, eziokwu ka dị: ha dị ka smart ka usoro data ha dị ọcha. Na mmelite okwu ilu ochie mkpofu n'ime/mkpofu, Ngwọta AI siri ike naanị dị ka ogo data ha sitere na nbanye. Na -enweghị mgbazi sitere na ndị mmemme, usoro data ndị a enweghị ahụmịhe ndabere iji dozie onwe ha - ebe ọ bụ na ha enweghị usoro ntụaka ọzọ.
Ịrụpụta data nke ọma bụ isi ihe niile ọgụgụ isi mmadụ. Na ndị mmadụ bụ isi ihe ngwọta.
Icheta AI bụ Ethical AI
Asịrị adịghị eme na agụụ. Ntọala data na -enweghị isi ma ọ bụ nke na -adịghị mma na -esite na iwere ụzọ na -ezighi ezi n'oge mmepe. Wayzọ a ga-esi lụso njehie na-enweghị isi ọgụ bụ ịnabata ụzọ ziri ezi, nke mmadụ na-eche, nke ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ na-akpọ Mindful AI. Mindful AI nwere akụkụ atọ dị mkpa:
1. Iche echiche AI ​​bụ mmadụ gbadoro ụkwụ
Site na mmalite nke ọrụ AI, na nhazi oge, mkpa ndị mmadụ ga -adịrịrị n'etiti mkpebi ọ bụla. Na nke ahụ pụtara mmadụ niile - ọ bụghị naanị ntinye ụtụ. Ọ bụ ya mere ndị mmepe kwesịrị ịdabere na ndị otu dị iche iche sitere na ụwa niile iji zụọ ngwa AI ka ọ bụrụ nke gụnyere yana enweghị echiche.
Ịgagharị data sitere na ndị otu zuru ụwa ọnụ, ndị otu dị iche iche na -ahụ na amatala nke ọma ma kpochapụ ya n'oge. Ndị sitere na agbụrụ dị iche iche, afọ dị iche iche, okike, ọkwa agụmakwụkwọ, ọnọdụ akụ na ụba na ọnọdụ akụ na ụba nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa data na-amasị otu ụkpụrụ karịa nke ọzọ, si otú a na-ewepụ echiche na-enweghị isi.
Lelee ngwa ngwa olu. Mgbe ị na -etinye ụzọ AI na -echebara echiche, na iji ike nke ọdọ mmiri ụwa zuru ụwa ọnụ, ndị mmepe nwere ike ịdekọ ihe asụsụ dị ka olumba na ụda olu dị iche iche na ntọala data.
Ịmepụta usoro nhazi ime mmadụ site na mmalite dị oke mkpa. Ọ na -aga ogologo ụzọ n'ịhụ na data ewepụtara, gwọọ, na akara ya na -ezute atụmanya nke ndị ọrụ njedebe. Mana ọ dịkwa mkpa idobe ụmụ mmadụ anya n'oge ndụ mmepe ngwaahịa niile.
Ndị mmadụ nọ na loop nwekwara ike inyere igwe aka ịmepụta ahụmịhe AI ​​ka mma maka ndị na -ege ntị ọ bụla. Na Pactera EDGE, ndị otu ọrụ data data AI anyị, nke dị n'ụwa niile, ghọtara ka ọdịbendị na ọnọdụ dị iche iche nwere ike isi metụta mkpokọta na nhazi data ọzụzụ AI a pụrụ ịdabere na ya. Ha nwere ngwaọrụ dị mkpa ha kwesịrị iji gosi nsogbu, nyochaa ha, ma dozie ya tupu usoro dabere na AI amalite.
Human-in-the-loop AI bụ “ụgbụ nchekwa” nke na-ejikọ ike nke ndị mmadụ-na nzụlite ha dị iche iche na ike igwe ngwa ngwa. Ekwesịrị ka etolite mmekorita mmadụ na AI a site na mbido mmemme ka data na -enweghị isi wee ghara ịtọ ntọala na ọrụ ahụ.
2. Ichebara AI echiche dịịrị ya
Ịbụ onye ọrụ bụ ịhụ na sistemụ AI nke enweghị ajọ mbunobi yana na ọ dabere na ụkpụrụ omume. Ọ bụ maka icheta otu, ihe kpatara ya, na ebe e si kee data, otu sistemụ AI si agbakọ ya, yana otu esi eji ya mee mkpebi, mkpebi ndị nwere ike ịbara ya uru. Otu ụzọ azụmahịa si eme nke a bụ ka ya na ndị obodo na-anọchite anya ya na-arụkọ ọrụ ka ọ bụrụ nke na-etinye ọnụ na enweghị mmasị. N'ọkọwa nkọwa data, nyocha ọhụụ na-akọwapụta etu ụdị ọrụ nwere ọtụtụ ọrụ si arụ ọrụ nke na-emeso aha onye nrụpụta ọ bụla dị ka subtask dị iche iche nwere ike nyere aka belata nsogbu nwere ike dị na ụzọ eziokwu ala nkịtị ebe esemokwu onye nrụpụta nwere ike ịbụ n'ihi ihe nnọchianya dị n'okpuru. enwere ike ileghara ya anya na nchịkọta akụkọ na otu eziokwu.
3. A pụrụ ịtụkwasị obi
Ikwenye ntụkwasị obi na -abịa site na azụmaahịa na -egosipụta nke ọma na enwere ike ịkọwa ya ka esi zụọ ụdị AI, ka o si arụ ọrụ, yana ihe kpatara ha ji atụ aro nsonaazụ ya. Azụmaahịa chọrọ nka na mpaghara AI iji mee ka ndị ahịa ya nwee ike ime ka ngwa AI ha bụrụ nke gụnyere yana ahaziri iche, na -akwanyere nuances dị oke mkpa n'asụsụ obodo yana ahụmịhe onye ọrụ nke nwere ike ime ma ọ bụ mebie ntụkwasị obi nke azịza AI site n'otu mba gaa n'ọzọ. . Dịka ọmụmaatụ, azụmahịa kwesịrị ịhazi ngwa ya maka ọnọdụ ahaziri iche na mpaghara, gụnyere asụsụ, olumba, na ụda olu na ngwa dabere na olu. N'ụzọ ahụ, ngwa na-ewetara otu ụdị ahụmịhe ahụmịhe olu ka ọ bụrụ asụsụ niile, site na Bekee gaa n'asụsụ ndị na-anaghị anọchite anya ya.
Ịdị Mma na Ọdịiche
N'ikpeazụ, AI na -echebara echiche na -ahụ na a na -ewuli ihe ngwọta na ntọala data ziri ezi na iche iche ebe a na -enyocha ma nyochaa nsonaazụ na nsonaazụ nke nsonaazụ ụfọdụ tupu azịza ya aga ahịa. Site n'ichebara echiche na itinye ụmụ mmadụ n'akụkụ niile nke mmepe ihe ngwọta, anyị na -enyere aka hụ na ụdị AI na -adị ọcha, na -enwechaghị mmasị, yana ụkpụrụ dị ka o kwere mee.
Tags: aiAmamịghe echicheenweghị mmasịnchịkọta data na -agbaghadata nchekwa datadata echekwaraụdịdị data agbasaghịdatasetịụkpụrụ aiọgụgụ isi mmadụezialagoogleasusu igboburu n'ucheịkpa ókè agbụrụmmekọahụismnwoke na nwanyimmekọrịta ọha na ezetụkwasị obi